Ny Tany, araka ny fahitana azy amin' ny alalan' ny fitaovana EPIC nentin' ny satelita DSCOVR, ahitana an' i Afrika sy i EorÃ´pa.
Ny Tany (marika: ) dia ny planeta fahatelo raha ny elanelany aminâ€™ny Masoandro no heverina ary izy irery ankehitriny no fantatra fa onenan-java-miaina eo amboniny. Ny tany dia niforona taminâ€™ny 4,5 lavitrisa taona lasa; anisanâ€™ny planeta vato eto aminâ€™ny Rafitry ny Masoandro izy io. Ny telo hafa dia i Merkiora sy i Venosy ary i Marsa.
Mampihodina ny Tany amin'ny Masoandro ny lanja lehibenâ€™ny Masoandro, tahaka ny lanja lehibenâ€™ny Tany mampihodina ny Volana manodidina azy. Ny isanâ€™ny andro ihodinanâ€™ny Tany aminâ€™ny Masoandro dia 365,25 andro eo ho eo. Izay no antsoina hoe herintaona. Ny isanâ€™ny andro ihodinanâ€™ny Volana manodidinâ€™ny Tany dia 27,33 andro. Izay no niavianâ€™ny anarana hoe Â«volanaÂ».
Ny Tany no planeta tena ahitana rano mikoriana eto aminâ€™ny Rafitry ny Masoandro, ary 71% ny velarany manontolo no misy izany. Izay koa no iantsoana ny Tany ho Â«planeta mangaÂ».
Eto amin'ny Tany dia ahitana karazana zava-miaina eo aminâ€™ny 14 tapitrisa eo ho eo. Eo amboniny no tena iainanâ€™ny ankamaroanâ€™izy ireo, ary misy ihany koa ireo karazan-java-miaina miaina any ambaninâ€™ny tany. Niova be mihitsy ny zava-maina teto an-tany. Ohatra, tany am-boalohany, ny sianÃ´bakteria dia nanova ny soson-drivotra iainana ary nanome Ã´ksizenina.
Merkiora â€” Venosy â€” Tany â€” Marsa â€” Jiopitera â€” Satorina â€” Iorano â€” Neptona
Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alÃ lan'ny fanitarana azy.
Voambolan' ny jeÃ´grafia
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tany&oldid=1043383"
Voaova farany tamin'ny 30 Janoary 2022 amin'ny 09:49 ity pejy ity.